मकर राशिका लागि भ्यालेन्टाइन डे कस्तो ? कसरी गर्ने प्रेम « Pariwartan Khabar
मकर राशिका लागि भ्यालेन्टाइन डे कस्तो ? कसरी गर्ने प्रेम
7 February, 2018 4:49 pm
भेटेर प्रपोज गर्ने हो भने कालो अथवा निलो रङ्गको वस्त्र कुइनासम्म ढाकिने गरी धारण गरी प्रपोज गरे त्यो अविस्मरणीय हुनेछ। यो राशिमाथि शनि ग्रहको राम्रो प्रभाव भएकाले गिफ्टका रूपमा इलेक्ट्रोनिक्स चीजहरू प्रयोग गर्दा बल आफ्नो पोल्टामा पर्न सक्छ। यस्तै भ्यालेन्टाइन कार्डहरूको प्रयोग गर्दा पनि इलेक्ट्रोनिक्समा आधारित बज्ने, बोल्ने खालका कार्डहरू वर्गाकार र आयताकार सेपमा रोज्नुपर्ने हुन्छ।